အတ္တလန်တိတ်ရှိ မုန်တိုင်းများ- အကြောင်းတရားများနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 12/01/2022 10:00 | မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်များ တိုးလာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လေထုနှင့် သမုဒ္ဒရာများ၏ ပုံစံအမျိုးမျိုးတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာသည် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော အပြောင်းအလဲများကို သတိပေးနေသည်။ ဟိ အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ တိုးများလာကာ ၎င်းတို့နှင့်အတူ ဟာရီကိန်းများနှင့် ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်လာသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများတိုးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းများနှင့် ပိုမိုအပူပိုင်းသတ်မှတ်ထားသော အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးဆက်များကား အဘယ်နည်း။
1 အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ
2 အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ တိုးလာသည်။
3 2020 ရာသီတွင် ကွဲလွဲချက်များ
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသည် သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သော လေထုအတွင်း ဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲမှုများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး Macaronesia ၏မြောက်ဘက်၊ Azores၊ Canary ကျွန်းများ၊ Madeira နှင့် သဲကန္တာရကျွန်းများနှင့် Iberian ကျွန်းဆွယ်၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ပါဝင်သည့် Macaronesia ၏ မြောက်ဘက်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အရာအားလုံးသည် ဒေသ၏ ရာသီဥတုအလှည့်အပြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။
2005 ခုနှစ်တွင် သမိုင်းဝင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ Canary ကျွန်းစုများသို့ ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းက အဆိုပါဒေသများကို ဖြတ်သန်းသွားသော အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းအရေအတွက်၊ လွန်ခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။. ဤဆိုင်ကလုန်းများသည် ပြင်းထန်သော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း၏ ရာသီဥတုရှိသော ဒေသများဖြစ်ပြီး လတ္တီတွဒ်အလယ်ပိုင်း မုန်တိုင်းများ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏ ဤအစိတ်အပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလေ့ရှိသော အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းများ၏ ပုံမှန်အပြုအမူများကို မဖော်ပြပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် အတ္တလန္တိတ်၏ တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ကာရေဘီယံကို ထိခိုက်စေသည့် ပုံမှန်အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းများနှင့် ပိုမိုဆင်တူကြောင်း ပြသထားသည်။
အမှန်မှာ၊ ဤဖြစ်စဉ်များသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် သဘာဝတွင် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့် US National Hurricane Center သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေဝေရေလဲများကို သုတေသနနှင့် စောင့်ကြည့်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များ၏ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသော အုပ်စုဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။
အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ တိုးလာသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကွဲလွဲချက်သည် ပြီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း တိုးလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထင်ရှားသော ဥပမာအချို့ရှိသည်။
ဟာရီကိန်းအဲလက်စ် (၂၀၁၆) Canary ကျွန်းစုများမှ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ခန့်အကွာ Azores ၏တောင်ဘက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်နာရီလျှင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း ၁၄၀ ကီလိုမီတာဖြင့် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အခြေအနေကို ရောက်ရှိပြီး မြောက်အတ္တလန်တိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ကာ ပုံမှန်မဟုတ်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရွက်လွှင့်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် 1.000 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပထမဆုံး ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဟာရီကိန်း Ophelia (2017)မှတ်တမ်းများစတင်ခဲ့သော (3) နောက်ပိုင်း အတ္တလန္တိတ်အရှေ့ပိုင်းတွင် ပထမဆုံး Saffir-Simpson အမျိုးအစား 1851 ဟာရီကိန်းဖြစ်သည်။ Ophelia သည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၇၀ ထက်မပိုသော အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကို ရရှိခဲ့သည်။
ဟာရီကိန်း Leslie (2018)ကျွန်းဆွယ်ကမ်းရိုးတန်း (ကီလိုမီတာ 100) အနီးသို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာသည့် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည် အရုဏ်တက်ချိန်တွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၉၀ အထိ တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။
ဟာရီကိန်း ပါဘလို (၂၀၁၉)၊ ဥရောပတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သမျှ အနီးစပ်ဆုံး ဟာရီကိန်း။
၎င်း၏နောက်ဆုံးဒီရေတက်ခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Theta သည် ကျွန်းများကို အပြည့်အဝထိခိုက်စေပြီး ကီလိုမီတာ 300 အကွာမှ Canary ကျွန်းများကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ဤကိစ္စများအပြင်၊ ၎င်းတို့သည် အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီး အထက်ဖော်ပြပါနေရာများကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့နှင့်အတူ လိုက်ပါလာသည့် ရှည်လျားသောစာရင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကြိမ်နှုန်းသည် ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်အထိ တိုးလာပြီး လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း တစ်ကြိမ်ထက်ပင် ပိုများလာသည်။ 2005 မတိုင်မီတွင်၊ ကြိမ်နှုန်းသည် သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုအန္တရာယ်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိဘဲ သုံးနှစ် သို့မဟုတ် လေးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
2020 ရာသီတွင် ကွဲလွဲချက်များ
ဤရှားပါးမှုသည် ယခုနှစ် ဇွန်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဟာရီကိန်းရာသီအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ခန့်မှန်းချက်များအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း 30 တွင် အလွန်တက်ကြွသောရာသီကို ညွှန်ပြထားပြီးဖြစ်သည်၊ မှန်ကန်သောစံချိန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သမိုင်းဝင် 2005 ရာသီကိုကျော်လွန်၍ ဂရိအက္ခရာဖြင့် အမည်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရာသီကို အမျိုးအစား3သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပြင်းထန်သော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အမှန်တော့၊ ၎င်းသည် မှတ်တမ်းများစတင်ခဲ့သည့် (၁၈၅၁) နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးရာသီလေးခုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး အမျိုးအစား5ဟာရီကိန်းတစ်ခုသည် ရာသီငါးခုဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အလွန်ကိုက်ညီပြီး အပြင်းထန်ဆုံး ဟာရီကိန်းများသည် အချိုးကျ ပိုမိုအားကောင်းကာ မကြာခဏ တိုက်ခတ်လေ့ရှိသည်။
အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ တိုးလာခြင်းနှင့် ဤကမ္ဘာ၏ အပူပိုင်းဒေသသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ အဖြေက ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် သုတေသနလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။. တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဆက်စပ်မှုကို သိရှိရန် လိုအပ်ပြီး စပိန်တွင် အခြားနိုင်ငံများတွင် လုပ်ဆောင်သည့် ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထူထောင်နိုင်သည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏မြစ်အတွင်းတွင် ဤဖြစ်စဉ်များ ပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပွားသည်ဟု ယူဆသည့် အနာဂတ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များကို လေ့လာမှုများအပေါ် အခြေခံသည့် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မျှော်လင့်ထားသောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စီစဉ်ခြင်းတိုးတက်စေရန်အတွက်ဤအနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်သုတေသနများပိုမိုလိုအပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ အမှန်အတိုင်းဆိုရသော် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးအစား3သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုမြင့်မားသော ပြင်းထန်မှုများကို ဘယ်သောအခါမှ မရောက်ပါ။ဟာရီကိန်းနှင့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်များသည် အမေရိကန်ကမ်းရိုးတန်းအပေါ် ၎င်းတို့၏ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကြောင့် အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပြီး စပိန်တွင် ယင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ်ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ခန့်မှန်းချက်များတွင် ပိုမိုမသေချာမရေရာမှုများ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆိုင်ကလုန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အလယ်ပိုင်း လတ္တီတွဒ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆိုင်ကလုန်းလမ်းကြောင်းများသည် ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်သောအချက်များဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည့် အပူပိုင်းဒေသများနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းနိုင်မှုနည်းသော အကြောင်းရင်းများဖြင့် လွှမ်းမိုးလာကာ မသေချာမရေရာမှုများ တိုးပွားလာပါသည်။ နောက်အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းကတော့ လတ္တီကျုအလယ်ပိုင်း မုန်တိုင်းများအဖြစ်သို့ စတင်ပြောင်းလဲလာသောအခါတွင် အကြီးမားဆုံးသော သက်ရောက်မှုများအတွက် အလားအလာ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ အကွာအဝေးကို ချဲ့ထွင်စေနိုင်သည့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခု၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မသေချာမရေရာမှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုအားလုံးကို 1851 ခုနှစ်မှ သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို ရည်ညွှန်းကာ အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် အဆိုပါမှတ်တမ်းများသည် 1966 ခုနှစ်မှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိခေတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမှန်တကယ် ခိုင်မာသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါက ဖြစ်နိုင်ချေရဲ့ အစပဲလေ။ ၎င်းတို့ကို ဂြိုလ်တုများဖြင့် ကြည့်ရှုပါ။ ထို့ကြောင့် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းနှင့် ဟာရီကိန်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လမ်းကြောင်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည့်အခါ ၎င်းကို အမြဲသတိရနေသင့်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် အတ္တလန္တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများတိုးလာရခြင်းအကြောင်းအရင်းများကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » အတ္တလန်တိတ်တွင် မုန်တိုင်းများ